तेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्- ३३ वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेँको छु त्यतिकै छाडेर कहाँ जानु? (भिडियो सहित):: Mero Desh
तेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्- ३३ वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेँको छु त्यतिकै छाडेर कहाँ जानु? (भिडियो सहित)
Published on: २४ श्रावण २०७८, आईतवार १४:०३
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्य कारी निर्देशक फेर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको छ।त्यसका लागि शाक्यलाई ‘मार्गप्रशस्त गरिदिन’ मन्त्री भुसालले आग्रह गरेकी छन्।
मैले काम गर्दा कोभिड ठूलो व्यवधानका रूपमा देखा पर्‍यो। ठेक्कापट्टा ढिलाइ भयो। निषेधाज्ञाले म्याद थप्नुप र्‍यो। आयोजनाहरूले म्याद थप गरे। सरकारले पनि म्याद थपिदियो। आफूले भनेजस्तो गर्न पाइएन।
भारत नेपाल इन्टरकनेक्सन मास्टरप्लान जसमा ४ सय केभीको प्रशारण लाइन जोड्ने थियो। त्यो थन्केर बसे कोलाई टेकअफ गरेर भारतमा गएर आफैँ भिडेर त्यो मास्टरप्लान अनुसार ट्रान्समिसन लाइन बनाउने मेरो सोच छ। उच्च भागमा स्टोरेज योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाई हो। दुधकोसी र उत्तगंगा लगायत अगाडि बढाउ नुपर्छ, मेरो प्राधिकरणले नेतृत्व गरेर भए पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो।